Ihu ike gwụrụ - Otu esi eji ọgwụgwọ dị mfe kwuo nke ọma | Bezzia
Otu esi ekwu nke ọma na ihu ike gwụrụ
Susana godoy | 11/05/2022 12:00 | Mma
Ị na-enwe ihu ike gwụrụ kwa ụbọchị? Mgbe ahụ ọ bụ oge ịsị nke ọma site n'ịkụ nzọ na ndụmọdụ kacha mma. Ọ bụ ezie na e nwere ọtụtụ ude na ahịa, anyị ga-ejikwa ụfọdụ, ma tupu nke ahụ, ọ bara uru ịkụ nzọ na mgbanwe ụfọdụ na usoro anyị nke ga-eme ka akpụkpọ ahụ anyị dịkwuo mma na ya na ike ọgwụgwụ ahụ anyị kwuru okwu ya.
Mgbe ụfọdụ, ọ bụghị naanị anya na nfụkasị ahụ nwere ike imebi ụbọchị anyị. ma ọ bụ izu. Ma ọ ga-abụkwa akpụkpọ ahụ nke a pụrụ ịhụ na-enweghị ìhè na ọchịchịrị gbara n'okpuru anya na-egbochi anyị ịhapụ agba ahụ nke na ọ ka na-eme ka ike ọgwụgwụ na-akawanye njọ. Ugbu a bụ oge a kapịrị ọnụ iji kwụsị ihe a niile. Chọpụta!
1 Zuru ike na mma
2 Jiri ịhịa aka n'ahụ rụọ ọrụ mgbasa ozi
3 Nzọ mgbe niile na hydration
4 Ice ma ọ bụ mmiri oyi dị ukwuu iji sị ihu ike gwụrụ nke ọma
5 Kukumba maka anya
Zuru ike na mma
Ee, ọ dị mfe ikwu ya ma ọ dịghị mfe ime ya kwa ụbọchị. N'ihi na ọtụtụ oge, ọ bụghị naanị anyị ka ọ na-adabere, n'agbanyeghị na anyị nwere ọtụtụ ihe anyị ga-eme. Oge erugo ịrara ụra, nke m ji n'aka na ị nwere. Gbalịa ịlakpu ụra nkeji ole na ole tupu ụbọchị ọ bụla, debe ekwentị mkpanaaka gị ma ọ bụ ngwaọrụ ndị ọzọ n'akụkụ ọkara awa tupu ịrahụ ụra, yana saa ahụ ọkụ.. Ndị a bụ ụfọdụ usoro nwere ike inye aka mee ka ahụ dị jụụ ma dị ka ndị dị otú ahụ, mee ka Morpheus leta anyị. N'ihi na n'ime ndị ọzọ bụ ntọala dum nke ihu na akpụkpọ anụ na-egbuke egbuke. Ebe ọ bụ na ọ bụ n'oge ụra mgbe mmụgharị cell na-ewere ọnọdụ, yana oxygenation ya. Ọ bụghị naanị maka nke ahụ kama maka ahụ gị dum, onye na-etiku n'ezie maka izu ike ahụ.
Jiri ịhịa aka n'ahụ rụọ ọrụ mgbasa ozi
Na ịhịa aka n'ahụ, na mgbakwunye na ịgbalite mgbasa ozi, anyị ga-enwekwa ike ụda ma wepu ahịrị okwu yana nweta nsonaazụ ntorobịa na nke ọhụrụ maka akpụkpọ ahụ anyị. O nwere uru ndị a niile na ọtụtụ ndị ọzọ, yabụ ị kwesịrị itinye ya na usoro ịma mma gị kwa ụbọchị. Enwere ike ime ịhịa aka n'ahụ na mkpịsị aka ma were ohere itinye ụfọdụ ụdị mmanụ ma ọ bụ ude iji mee ka ọ dị mfe. Cheta na ha ga-abụ okirikiri ma na-arịgo mgbe niile, ebe ọ bụ na nke a bụ otú anyị si eji uru na-ekwu nke ọma na wrinkles nwere ike ịpụta.
Nzọ mgbe niile na hydration
Mmiri mmiri kwesịrị ịdị na ndụ anyị mgbe niile. N'otu aka ahụ, anyị ga-etinye ya na mpụga ekele maka ude ma ọ bụ ihe mkpuchi. N'ihi na n'ụzọ dị otú a a ga-ahụ ihu na ọtụtụ ìhè. Mana anyị enweghị ike ichefu ị drinkụ mmiri zuru oke kwa ụbọchị, ebe ọ bụ na akpụkpọ ahụ nwekwara ike igosipụta nsogbu ụfọdụ sitere n'ime. N'ihi ya, ịnọrọ mmiri mmiri ma ọ bụ hydration bụ otu n'ime ngwọta kachasị mma ị ga-atụle. N'ezie, ọ bụrụ na ọ na-esiri gị ike ịṅụ mmiri dị ukwuu, ị nwere ike inyere onwe gị aka mgbe niile na infusions, dịka ọmụmaatụ, ma ọ bụ mmiri na lemon.
Ice ma ọ bụ mmiri oyi dị ukwuu iji sị ihu ike gwụrụ nke ọma
Ịkwado ihu ike gwụrụ nwekwara ike iji ọgwụgwọ ụlọ mee ya. N'ezie na ị maraworị aghụghọ nke ice cube, nke, mgbe gafere Ọ ga-enweta mmetụta ozugbo site na imechi akpụkpọ ahụ ma hapụ ọzịza ahụ n'akụkụ.. N'otu aka ahụ, ị ​​nwekwara ike ịsacha ihu gị na mmiri oyi dị ukwuu, n'ihi na mmetụta ya yiri nke ahụ. Ọ na-eme ka mgbasa ozi rụọ ọrụ, na-emechi pores ma gbatịa ihu ntakịrị. Kedu ihe ọzọ anyị nwere ike ịrịọ?
Kukumba maka anya
Maka anya kpọmkwem na maka okirikiri gbara ọchịchịrị, enwere ọtụtụ ọgwụgwọ ụlọ anyị nwere ike ịchọta. Ma n'enweghị obi abụọ ọ bụla, ọhụrụ bee kukumba Mpekere na inwe ike izu ike maka nkeji ole na ole na ha, bụ otu n'ime ngwọta kachasị mma iji hapụ ihu ike gwụrụ. Ị nwere ike idowe iberi ahụ dum n'elu anya, dịka anyị kwuru, ma ọ bụ bee ọkara n'ime nkeji iri na ise iji tinye n'elu okirikiri gbara ọchịchịrị.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Bezzia » Mma » Otu esi ekwu nke ọma na ihu ike gwụrụ
Ụda Summer, mkpokọta ememme Springfield
Nri nwere ígwè maka nri nwa ọhụrụ